Ohlangothini nomzimba womuntu ngamunye ngokufanele imisipha etshekile besisu ukuthi enze imisebenzi ehambisana nendikimba ngokushintshana. Etshekile imisipha besisu zihlukaniswe zangaphakathi nezangaphandle. Domestic ukudlula sasivumela obunzima obuvela ukhalo kuya sternum, nangaphezulu kubo zitholakala ngaphandle imisipha nje ngaphansi kwesikhumba. Asiza umzimba ukusonta futhi goba. Ngu Ukusonta kwesokunxele bazibandakanye esihlathini kwesokunxele nemisipha kwesokudla kwangaphakathi, futhi ezimazombe ngakwesokudla, kunalokho. I etshekile imisipha besisu nge transverse imisipha besisu usebenze emgogodleni sinjalo umsebenzi ngokwandisa ingcindezi besisu. Ngaleyo ndlela nokufeza ukusebenza okunempilo yomgogodla futhi zigcine indawo efanele izitho zangaphakathi.
etshekile sangaphandle imisipha besisu kukhona ngobukhulu futhi ovelele kunayo yonke imisipha besisu. Limatasa lapho ukuvula noma eguqa phambili, futhi zisiza nawuphakamisa noma bethwele izinto ezisindayo. Ngaphezu kwalokho, lawa kuphela imisipha imisipha besisu, okuyinto enimi umsebenzi njalo ngenkathi isikhundla. Zisisiza ukuhlala umzimba oqotho, akakuvumeli adonsela phansi kuthinte ibhalansi womuntu. nabo ukusekela elisezansi ngemuva nomgogodla iminyakazo ahlukahlukene.
Qala zangaphandle etshekile imisipha besisu ukuze ebusweni elingaphandle emaphethelweni engezansi, lapho sinamazinyo amakhulu irowu ezinhlanu zazo zitholakala phambi imisipha toothed, futhi emazinyweni ezintathu aphansi eziyingxenye le latissimus dorsi. imishayo Upper imisipha uqwanga kwakhiwa emhlabeni izimbambo futhi wandise ohlangothini ovundlile. Imishayo elise ngezansi pass emgqeni noma ukuchema kuzo kusukela phezulu kuya phansi. A imishayo lowermost baqondiswa thwi phansi. Zonke izinyanda kwemisipha ukuze emaphethelweni rectus ukudlula phakathi fascia.
Liningi igazi enikeziwe etshekile zangaphandle imisipha posterior intercostal lemithambo Umthambo eligcizelela ukubukeka kwangaphandle, oluzungeze ithambo iliac, kanye lateral Umthambo thoracic.
Yangaphakathi etshekile imisipha besisu zenzelwe ikhululeke emgogodleni ekunciphiseni kwabo zamazwe amabili. Endabeni ka ukuncipha sohlangothi olulodwa le misipha ngokuhlanganyela zangaphandle etshekile imisipha kusiza ukushintshanisa izindlu kanye imiphetho aphansi.
I yangaphakathi imisipha etshekile evela umugqa Lesisemkhatsini Crest iliac, fascia thoracolumbar, kanye ingxenye lateral we umsipha inguinal. I fibre enqwabelanisa engxenyeni engenhla imisipha enamathiselwe uqwanga ngokufanele kwi nangezansi futhi wandise phezulu. A imishayo aphansi iqondiswe kokubili phezulu naphansi ikhule ibe aponeurosis lokubanti mayelana wesifunda ku- ithambo pubic kusukela uqwanga X, esisogwini emaphethelweni. Imishayo engezansi imisipha futhi basonta intambo spermatic kwakhiwa, is ukuze imisipha obhekene nokuvusa amaqanda.
Perfusion inikezwa imisipha etshekile yangaphakathi Umthambo musculo-diaphragmatic, engenhla nabaphansi imithambo epigastric, futhi indluzelekazi imithambo intercostal.
Etshekile imisipha besisu, kanye imisipha lumbar, stabilizers basonta imisipha. Ukuqinisa le misipha ziyogcina ukuma okuhle futhi ukuqinisekisa ukusebenza okunempilo sokukhubazeka komgogodla. Noma yimuphi ukunyakaza eziyinkimbinkimbi yomzimba eqala, okokuqala kunakho konke, kuba ukuncishiswa imisipha besisu. Kuphela ngemva kwalokho umsebenzi idluliswe kwamanye amaqembu kwemisipha. Ngakho-ke kubalulekile ukuba banake ngenxa ukuqaliswa umzimba ukulondoloza imisipha ithoni emaphephandabeni, uma kungenjalo kukhona Ukungadli ukuthuthukiswa umsipha noma asymmetry okhalweni. Lapho usebenzisa i-cindezela akufanele sikhohlwe ukuthi ukuze kufezwe impumuzo enhle ngazo ungqimba amafutha akumele leqe 1.5 cm, ngakho ukuqeqeshwa kufanele sibhekiswe imisipha hypertrophy, kanye nokwehla amafutha amaseli ongama.
Isikhathi esijwayelekile esikhundleni pads kungasindisa ukuphila